I-Huawei Mate X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusemthethweni | I-Androidsis
Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo IHuawei iqinisekisile ubukho bayo kwi-MWC 2019, bebezakubaphi umcimbi wokubonisa. Uphawu lwesiTshayina yenye yezona zinto zinomdla kulo msitho e-Barcelona. Njengoko iindaba ezininzi kulindeleke kuwe, nangona kukho isixhobo esenza umdla okhethekileyo, oyimodeli yokusonga. I-Huawei Mate X, ethe ekugqibeleni yenziwa yaseburhulumenteni kumsitho.
Izolo nje igama lesixhobo lityhilwe, Enkosi kwiposta. Nangona bekungekho kude kube ngumnyhadala wentetho xa besikwazi ukwazi iinkcukacha ezithile malunga nolu hlobo lwe-smartphone. Sele siyazi le Huawei Mate X, eyenzeka kwiintsuku ezimbalwa emva kwe I-Samsung Galaxy Fold.
Kucacile iinyanga ukuba ukusonga ii-smartphones kwakuza kuba yenye ye imikhwa emihle kulo nyaka. Ngoku, kwisithuba seveki sineemodeli ezimbini ezibaluleke kakhulu kweli candelo. Into enomdla ngale Huawei Mate X kukuba luphawu ukubheja kwinkqubo yokusonga eyahlukileyo kuleyo yeSamsung.
Le yinto ekuvumela ukuba ube nesixhobo esahlukileyo kunale siveliswe luhlobo lwaseKorea kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Yintoni egqithisile, ibonakala ngokukodwa ukuba ilungile, into engathandabuzekiyo impumelelo ebalulekileyo kolu hlobo lwesixhobo. Ke sifumana umbono owahlukileyo, owona unomdla kuyo nayiphi na imeko.
1 Iinkcukacha zeHuawei Mate X
2 I-Huawei Mate X: Ubuchule njengophawu olubalulekileyo
Iinkcukacha zeHuawei Mate X
Njengoko kulindelwe, kwinqanaba lobugcisa singaphezulu kwako konke okuphezulu kuluhlu. Uphawu lwaseTshayina lusishiya ngesixhobo esipheleleyo. Kwinkcazo-ntetho yabo bafuna ukugxininisa kuyilo olutsha, kodwa ngaphandle kokufuna ukungahoyi imigaqo esishiya. Yindibaniselwano ephambili kwesi sixhobo. Ukongeza, njengoko besele sichazile kwezi nyanga, Ikwayifowuni yefowuni yokuqala ye-5G. Ukucaciswa kwayo ngokupheleleyo zezi:
Ukucaciswa kobuchwephesha kwiHuawei Mate X
Umzekelo Umtshato X
Inkqubo yokusebenza I-Android 9.0 Pie ene-EMUI 9 njengomaleko
Isikrini 8 intshi enesisombululo sama-pixels angama-3120 x 1440 (6.39 intshi esongiweyo kunye no-6.6 intshi ngaphambili asongwe)
Inkqubo I-Kirin 980 ene-Balong 5000 njengemodem
Ukugcinwa kwangaphakathi 512 GB
Ikhamera esemva I-40 MP ye-angle ebanzi + ye-16 MP ye-angle ebanzi ye-ultra + ye-8 MP yefowuni
Ikhamera yangaphambili Akukho khamera yangaphambili
Conectividad I-5G Dual Sim iBluetooth 5.0 WiFi 802.11a / b / g / n / ac i-USB-C
Ezinye izinto Inzwa ye-NFC yeminwe yeminwe ecaleni
Ibhetri I-4.500 mAh ene-55W yeHuawei SuperCharge
Ubukhulu Ubukhulu be-11mm isongwe (5.49mm ityhilwe)
Ixabiso 2299 euro
IHuawei iyayazi into eyenzayo ngale fowuni. Uhlobo lwentengiso lungena kwicandelo lokusonga kunye nale modeli, inesikrini esizi-intshi ezi-8. Xa isongwe, iba yi-6,39-intshi ye-smartphone, kunye nescreen sesibini njengenkxaso ngasemva kwesixhobo. Njengoko sele kukhankanyiwe, ubukhulu yinto ephambili yesixhobo. Zincinci kakhulu ezi ntlobo zeefowuni.
Xa ivela, Le Huawei Mate X isishiya nescreen se-8-intshi. Kule krini asifumani inotshi, umgodi okanye nantoni na. Ke ngoko, ukuba isetyenziswe ngokupheleleyo, asinayo ikhamera yangaphambili kwisixhobo. Kuya kufuneka uyisonge kuqala ukuze ubuyele kwindlela ekuthiwa yeyomnxeba. Iikhamera zangasemva zesixhobo zisetyenziselwa ezi selfies ngokufanayo.
I-Huawei Mate X: Ubuchule njengophawu olubalulekileyo
Ngaphandle kwamathandabuzo, inkqubo yokusonga ibiyinto ephambili kule smartphone. Inamalungu angama-100 kwaye iye yafuna iminyaka emithathu yophuhliso, ukuqinisekisa ukuba isixhobo sinokuzisonga, ngaphandle kokonakalisa isikrini. Xa sisongelwe, sine I-11 millimeters ubukhulu kunye ne-5,49 millimeters nje. Kulungile ngokwenene malunga noku, ngokungathandabuzekiyo kube ngumceli mngeni kwinkampani.
Isikrini esikhulu seHuawei Mate X sibonelela ngezibonelelo ezininzi. I-brand ibalaselisa ukuba kulula kakhulu ukuyifunda, kunye nokulungela ukubukela iividiyo kuyo. Baye bafuna ukugxininisa ukusetyenziswa kwemveliso kule ntetho yesixhobo. Ukongeza, abasebenzisi banikwa amandla okwenza oko sebenza kwimowudi yokwahlulahlula isikrini, evumela isiqingatha ngasinye sesikrini ukuba sisetyenziswe kwiscreen esahlukileyo kwezinye iiapps. Ke ngoko, ikwayimodeli elungileyo yokusebenza nayo.
Kwelinye icala, yifowuni yokuqala yophawu ene5G. Yayo, Sebenzisa imodem yeBalong 5000 ukuba uHuawei wazise iiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Njengeprosesa, isebenzisa i-Kirin 980, eyona inamandla kunayo inkampani ekhoyo ngoku. Okufanayo sinako kwi-Mate 20 kunye ne-20 Pro yohlobo. Le modem inoxanduva lokubonelela ngesixhobo ngesantya esikhulu, ukuya kuthi ga kwi-4,6 Gbps yokukhuphela. Nangona kuya kuxhomekeka kummandla. Kodwa inkampani iyithethile le nto IHuawei Mate X ikuvumela ukuba ukhuphele imovie ye-3 GB kwimizuzwana nje emi-1.
Iza nebhetri yomthamo we-4.500 mAh. Kodwa kunokwenzeka ntoni Olona qhankqalazo kukuhlawula ngokukhawuleza, i-55W. Yeyona ntlawulo ikhawulezayo inamandla kwintengiso malunga noku. Njengoko inkampani yatshoyo kwintetho, ifowuni inokuhlawuliswa nge-85% kwimizuzu nje engama-30. Le ntlawulo ikhawulezayo iza phantsi kwegama elithi Huawei SuperCharge.
Nje ukuba ukubalulwa kwale Huawei Mate X kwaziweLixesha lokuba sazi ukuba singalindela nini ukuya evenkileni, ukongeza kwixabiso eliza kuba nalo. Ukuba isixhobo sikaSamsung saphoxisa abaninzi ngexabiso laso eliphezulu, kuya kuhlala kubonakala ukuba loluphi uphawu lwaseTshayina
Ewe, kule meko, ukumangaliswa ngokuqinisekileyo kuya kuba kukhulu kubasebenzisi abaninzi. Kuba ixabiso lale Huawei Mate X liphezulu kunoko sikufumanayo kwisixhobo seSamsung. Njengoko kubonisiwe kwintetho yesixhobo, iya kuza nohlobo nge-8 GB ye-RAM kunye ne-512 GB yokugcina ngaphakathi, ngexabiso le-2.299 euro.
Emva kokukhululwa kwayo, kulindeleke ukuba iphehlelele ezivenkileni phakathi kulo nyaka. Umhla othile awuchazwanga, mhlawumbi uya kuba malunga noJuni. Kodwa kuya kufuneka silinde isiqinisekiso esivela kwinkampani malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Huawei Mate X: Ukusonga kweHuawei ngokusesikweni kusemthethweni